Lahatsoratra nataon'i Tricia Gellman momba Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Tricia Gellman
Tricia Gellman dia CMO an'ny mandresy, ny sehatra fampitomboana ny vola miditra. CMO 3x (taloha ny Checkr sy Salesforce Canada), i Tricia no mpanoratra an'i CMO 3.0 newsletter isam-bolana, ary mpampiantrano ny Podcast amin'ny CMO Conversations.
Ny lalàna mifehy ny varotra vaovao: vola miditra, na hafa
Alarobia, Septambra 23, 2020 Alarobia, Septambra 23, 2020 Tricia Gellman
Ny tsy an'asa dia nidina hatramin'ny 8.4 isan-jato tamin'ny volana aogositra, satria sitrana tsimoramora avy amin'ny tampon'aretina i Amerika. Saingy ny mpiasa, indrindra ny matihanina amin'ny varotra sy ny marketing, dia miverina amin'ny tontolo hafa. Ary tsy toy ny zavatra hitantsika teo aloha izany. Rehefa niditra tao amin'ny Salesforce tamin'ny taona 2009 aho dia teo an-tampon'ny resa-be. Ny toe-tsaintsika mpivarotra dia nisy fiantraikany mivantana tamin'ny fanamafisana ny fehikibo izay vao niseho erak'izao tontolo izao. Fotoana mahia ireo. fa